Ary mitarika azy ho aiza ? Ho amin’ilay fitsarana izay ambaran’ny Tenin’Andriamanitra (Hebreo 9 .27). Hoy koa anefa ny Soratra Masina : “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy helohina… “ (Jaona 3 .17-18)
“Fa iray no Mpanalàlana amin’Andriamanitra sy ny olona, dia i Kristy Jesoa, Izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avotra hisolo ny rehetra” (1 Timoty 2.5-6).
“Fa amin’ny anarany no ahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka” (Asa 10.43).
Fa io fahamoram-po io, na dia lalina dia lalina tokoa aza, dia tsy afaka ny hanatsara ilay toetrantsika efa ratsy hatrany am-piandohana, na hanafoana ny fototry ny fahoriantsika rehetra, na hanaisotra ny fahamelohantsika. Izany indrindra no antony nitondran’i Jesoa ny otantsika mihitsy, fa tsy ny vokany ihany, raha nanohy io asam-pitiavany io Izy. “Ary nataon’i Jehovah nihatra taminy avokoa ny helotsika rehetra” (Isaia 53.6).
Teo amin’ny hazofijaliana no nanolorany ny ainy masina hanoloana ireo fiainantsika meloka; noraisin’i Jesoa ho toy ny azy daholo ireo fahotantsika. “Natao ota hamonjy antsika Izy” (2 Korintiana 5.21).
“Ary Izy nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambonin’ny hazo” (1 Petera 2.24).
“Indro, ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena”
(2 Korintiana 6.2).
Editeur : BPC- La bonne semence. France Réf. SV009 MA